नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास निकै लामो छ । परापूर्वकालदेखि आम मानिसले आयुर्वेदबाट उपचार गर्दै आएका छन् । देशमा आयुर्वेदिक शिक्षाको आरम्भ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले गरेका थिए भने आयुर्वेद चिकित्साका लागि राजा प्रताप मल्लले सिंहदरबारमा वैद्य खाना सञ्चालन गरेका थिए । नेपालमा पहिलो पटक प्राविधिक पढाइ...
यस वर्षको क्यान इन्फोटेक मेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । प्रस्तुत छ, यो मेलाले सर्वसाधारणको जीवनशैली र प्रविधिको विकासमा पार्ने प्रभाव, नेपालको प्रविधि क्षेत्रका समस्या तथा समाधान, क्यान महासंघको योजना लगायत विषयमा क्यान महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरासियासँग आर्थिक अभियानका युवराज बस्नेतले गरेक...
व्यवस्थापन तथा प्रविधिको हिसाबले यसपटकको मेलामा विगतको भन्दा के फरक छ ? मेला प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने गरे पनि यो प्रविधिको क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ विकास भइरहेको हुन्छ । १ वर्ष अवधिसम्ममा ल्यापटप, मोबाइल, ड्रोन, टीभी, प्रिन्टिङ मेशिन लगायतमा धेरै प्रविधि भित्रिएका हुन्छन् । यस्ता उपकरणको बाह...
मेला गतवर्षको खासै फरक भएन भन्ने गुनासो अवलोकनकर्ताले गरेका छन् । प्रविधिको मेला भएपछि यससम्बन्धी जुन सामान हुनुपर्ने हो, त्यो नराखिएको पनि देखियो । किन यस्तो भएको हो ? हाम्रो प्रमुख उद्देश्य नै प्रविधिका सामग्रीको प्रदर्शनी हो । मेला विगतको भन्दा निकै फरक छ । यो त मानिसको बुझाइमा पनि भर पर्ने कुरा...
धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको अर्को नगरपालिका हो गोदावरी नगरपालिका । धनगढी उपमहानगरपालिका (अत्तरिया) र भीमदत्त नगरपालिका (कञ्चनपुर)पछि बढी आर्थिक स्रोत भएको नगरपालिका पनि गोदावरी नगरपालिका नै हो । १२ वडा रहेको यो नगरपालिकाभित्र विकट ग्रामीण बस्तीका साथै पडाडी क्षेत्र समेत छन् । नगरपालिकालाई आर्थि...
पछिल्लो सयम बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरू माथिको नियमन कार्यलाई आक्रामक बनाउँदै लगेको देखिन्छ । साथै, समितिले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरेर बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यस्तै ‘बीमा विधेयक, २०७५’ पनि संसदमा दर्ता भइसकेकाले अब छिट्टै बीमा क्षेत्रले नयाँ ऐन पाउँदै छ । प्र...
बीमा कम्पनीहरूको साझा संगठनको रूपमा नेपाल बीमक संघ रहेको छ । तर हाल जीवन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो छुट्टै संगठन बनाउन लागेका छन् । यसका लागि तदर्थ समितिको गठन समेत भइसकेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा जीवन बीमा कम्पनी संघका संयोजक शिवनाथ पाण्डेसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :...
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको तथ्यांक अनुसार २०७५ मङ्सिरदेखि माघ ८ गतेसम्म ६०४ जना बिरामीको परीक्षण गरिएकोमा ३०५ जनालाई एचवानएनवान/एन्फ्लुएन्जा अर्थात् स्वाइनफ्लू प्रमाणित भएको छ । यो अवधिमा उक्त रोगबाट पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २००९ मा मात्र पत्ता लागेको स्...
सरकारले स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदानमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले ब्याज अनुदानमा ७ प्रकारका कर्जा बैंकमार्फत पाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधिभित्र रहनु पर्नेछ...
नेपाली वित्तीय बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको हिस्सा संख्यात्मक रूपमा बढी छ । साथै, उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेख्य मद्दत पुर्‍याउँदै आएका छन् । विशेषगरी लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गरेका छन् । र, त्यहाँ भएको पूँजीलाई संकलन गरेर तरलताको वृद्धि गर्ने क...